दुःखको कारण र सुखको उपाय बीचको अन्योल र वास्तविकता - Damauli Khabar
समाजसेवा, राजनीति देखि लिएर सञ्चारकर्मको यात्रामा पण्डित
तनहुँले पायो श्रममन्त्री तर वैदेशिक रोजगारीमा तनहुँमै दुई करोड बढीको ठगी उजुरी
शुभकामना गोविन्दराज जोशी
शाहरुख खानका छोरा पक्राउ
प्रतिमा कार्कीले बेस्ट फिमेल पेजेन्ट डाइरेक्टरकाे अवार्ड हात पारेकी छिन्।
काँग्रेस नेता जोशीको जिल्ला भ्रमण
Home/All/दुःखको कारण र सुखको उपाय बीचको अन्योल र वास्तविकता
Damauli KhabarAugust 15, 2021
हामी कलियुगमा छौं । यहाँ दुःखबाहेक अरू केही छैन । जसलाई सुख भन्नुहुन्छ, त्यो क्षणिक मात्र छ ।
आधिः जो मानसिक कष्ट या चिन्ताबाट दुःखबाट हुन्छ । मसँग पैसा छैन, घर छैन, जागिर छैन, प्रमोसन भएन, सम्मान पाइएन, रूप राम्रो छैन, सिक्स प्याक छैन, विवाहका लागि सुन्दर, धनी राम्रो घरानाको वरबधू भेटेको छैन । जिरो फिगर छैन । सम्पूर्ण अभावहरू यसमा पर्छन् । जो तपाईंसँग छैन तर प्राप्त गर्ने चाहनाले दुःखी हुनुहुन्छ ।
व्याधिः जो शारीरिक पीडासँग सम्बन्धित छ, शरीर बिमार छ, कमजोर छ रोग लागेको छ । थाइराइड, ब्लड प्रेसर, सुगर वा कुनै न कुनै रोगले हामी ग्रसित छौं ।
उपाधिः जो बाहिरबाट देखिने सबै छ तर खुसी भने छैन । छोरो छ तर नालायक छ, पैसा छ तर बैंकलाई किस्ता बुझाउनुपर्छ, गाडी छ तर त्यसभन्दा राम्रो किन्ने इच्छा छ । जागिर छ तर भन्सार, एयरपोर्टमा पोस्टिङ भएन या विदेश भ्रमण जान पाइएन । राम्रो स्कूलमा छोराछोरीलाई भर्ना गराउन सकिएन, सारी त छ तर करिना कपुरले लगाएको जस्तो छैन । विवाह त भयो तर बेकार गरिएछ भन्ने जस्तो लागेको छ । छोराछोरीको बाजा बजाएर विवाह गर्ने विचार थियो तर मन परेको केटीकेटीसँग भागिदिई । सबै प्रकृतिजन्य वा समाजद्वारा जन्माएका दुःखहरू यसमा पर्छन् । जो तपाईंसँग छ तर भएर पनि तपाईं खुसी हुनुहुन्न ।
यो सबै दुःखको कारण मन हो । मनुष्यको मन अपार इच्छाले भरिएको हुन्छ । मनको संवेदनशीलताले मानिसलाई दुःखी तुल्याउँछ । जबजब हाम्रा इन्द्रियहरूलाई आनन्द आउँछ, तब मन खुसी हुन्छ र जब इन्द्रियहरू दुःखी हुन्छन्, तब मन दुःखी हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । एउटा कुरा नभुल्नुहोला, हाम्रो मन नै दासत्वको कारण हो भने त्यही मन नै मुक्तिको पनि माध्यम हो ।
हामी सबै यिनै दुःखहरूमा जेलिएका छौं । जब आधि, व्याधि र उपाधिबाट टाढा रहनुहुन्छ, तब मात्र तपाईं समाधिमा पुग्न सक्नुहुन्छ । अब लक्ष्य फेरि यही कलियुगमा जन्म लिएर आधि, व्याधि र उपाधिलाई झेल्ने हो कि समाधि हुँदै महासमाधि प्राप्त गर्ने हो, त्यो तपाईंको आहार, विचार र व्यवहारमा भर पर्छ ।
हामीले हाम्रो जीवनयापनका लागि गर्ने सबै प्राकृतिक कार्यहरूलाई क्रमण भनिन्छ । जबसम्म ती कर्महरूलाई स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा गरिन्छ, जब तिनै कार्यहरू गर्दैगर्दा यदि हामीले अन्य जीवित प्राणीहरूलाई चोट (मन, वचन र कर्मले) पुर्‍याउँछौं भने त्यसलाई अतिक्रमण भनिन्छ ।
यदि तपाईं मोक्ष प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने जानेर नजानेर भएका अतिक्रमणको पाप हटाउन तपाईंले प्रतिक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक शुद्धिका लागि नराम्रो कर्म पखाल्नुपर्छ । अतिक्रमण भनेको नै कर्मको फल हो । यदि यस जन्ममा तपाईंले कसैलाई दुःख दिनुभएको छ भने अर्को जन्ममा तपाईंलाई अरू कसैले दुःख दिन्छ । तपाईंले अतिक्रमणबाट आएको आफ्नो भागमा भएको दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ । नकारात्मक आचरण भनेको कर्मिक दाग हो । यसबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईंले प्रतिक्रमण (पश्चाताप, दान, पुण्य र क्षमा माग्नु) गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रमणले अर्को मान्छेले तपाईंलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नेछ । यसले न केबल तपाईंको आफ्नो उद्देश्यलाई सुधार गर्दछ, यसले अर्को व्यक्तिको मनसाय र मनोवृत्तिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । मोक्ष प्राप्त नभइञ्जेलसम्म तपाईं क्रमण–अतिक्रमण–प्रतिक्रमणको चक्रमा घुमी नै रहनुहुन्छ । त्यसले सबैभन्दा ठूलो कुरा कर्म रहेछ । कर्म गर्दा विचार पुर्‍याएर गर्नुहोला । कर्मबाट ब्राह्मण बन्ने कोसिस गरौं, धर्मबाट मात्र होइन ।
धर्मशास्त्रअनुसार मानव ४ थरिका हुन्छन्ः महामानव, मानव, दानव र दृष्ट – निकृष्ट मानव । अनि ती मानव जातिमा ३ गुण हुन्छन् । सत्वगुण, रजगुण र तमगुण । इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति र ज्ञानशक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने मात्र हामीमा भएका कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, नत्र भने हामी ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको दास भएर बाँच्नुपर्छ ।
हामीमा भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंकार, दृष्टिदोष विकारहरू हुन् । यी सबै कुराहरू मानिसको मनमा हुन्छन् । आहार, निन्द्रा, भय, मैथुन यी ४ कुरा पशपुन्छी र मानिसमा समान हुन्छन् तर धर्म (विवेक) मान्छेमा मात्र हुन्छ । मानव जाति प्राणी जगतको सबैभन्दा चेतनशील, विवेकशील र विकसित प्राणी हो तर जब विवेक हराउँछ, उ दानव वा दृष्ट – निकृष्ट मानव बन्न पुग्छ । त्यसैले धर्म (विवेक) को ख्याल गरौं, नत्र हामी पशु–समान हुनेछौं ।
भनिन्छ, एकपटक झूट बोल्नुभयो भने त्यसपछि तपाईंका सबै सत्यहरू शंकास्पद हुनेछन् । हामीले भित्रबाट रिस, राग, काम, क्रोध, घृणा, छटकपट, भ्रम र लोभ हटाउनुपर्छ । मनमा आउने सबै नकारात्मक झुकावहरूका कारणले गर्दा हामीहरूले सत्यलाई बिस्तारै छोड्दैछौं । एउटा कुरा सदैव मनमा राख्नुहोस् । सत्यबाट प्राप्त हुने खुसी स्थायी हुन्छ र असत्यबाट प्राप्त हुने आनन्द क्षणिक हुन्छ ।
मृत्यु जीवनको एक हिस्सा हो । मरेर लानु केही पनि छैन । धन सम्पत्ति, साथी गुमाउँदैमा चिन्ता लिनुपर्दैन । एकदिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हाम्रो जीवन हामी सबैले गुमाउनुपर्नेछ । बाँचुञ्जेल तन, मन, वचनलाई शुद्ध बनाउनुहोस् । मन, वचन, कर्मले कसैलाई पनि दुःख नदिनुहोस् ।
क्लेस (कष्ट र पीडा) का ५ कारणहरू छन् । अज्ञानता वा बुद्धिको अभाव (अविद्या), घमण्ड वा अहंकार (अस्मिता), लगाव (राग), घृणा (द्वेष) र मृत्युको डर र जीवनलाई मर्नबाट डरेर माया गर्ने (अभिनिवेश) । पहिलो २ बौद्धिक दोष हुन् भने अर्का २ वटा भावनात्मक दोष हुन् र अन्तिम सहजै आउने दोष हो ।
कष्ट र पीडाको मुख्य कारण अविद्या हो । हेर्ने र देखिएको चिज बीचको संयोजन बुझ्न नसक्नुको परिणाम नै विफलता हो । यी सबै कष्ट र पीडाका कारणहरू हामीभित्र लुकेका, सुप्त वा अत्यधिक सक्रिय अवस्थामा हुन्छन् । अहिलेको समाजमा हामी धेरैजसो यिनै कष्ट र पीडामा जकडिएका छौं ।
सबै कष्ट र पीडाबाट छुटकारा पाउन हामी पहिला आफूलाई चिन्नुपर्छ । प्रातिभासिक जीव, जाग्रत जीव, पूर्ण सत्य जीवमध्ये हामी को हौं ? त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । हामी सधैं मलाई अरूले कसरी हेर्छन्, म अरूबाट कसरी हेरिन चाहन्छु र मैले आफैंलाई कसरी हेर्छु भन्ने द्विविधामा हुन्छौं ।
प्रकृतिका ३ वटा कडा नियम छन्, जो सत्य छन् । प्रकृतिको पहिलो नियम – यदि खेतमा बिउ छर्नुभएन भने प्रकृतिले खेतमा घाँस उमारिदिन्छ, आफ्नो मन मस्तिस्कमा सकारात्मक विचार राख्नुभएन भने नकारात्मक विचारले आफ्नो स्थान आफैं बनाउँछ ।
प्रकृतिको दोस्रो नियम – जोसँग जे छ, त्यही बाँड्छन् । सुखीले सुख बाँड्छन् ! दुःखीले दुःख बाँड्छन् ! ज्ञानीले ज्ञान बाँड्छन् ! भ्रमितले भ्रम बाँड्छन् ! भयभीतले भय बाँड्छन् !
प्रकृतिको तेस्रो नियम – जीवनमा जे मिल्छ, त्यसलाई पचाउन (स्वीकार गर्न) सिक्नुहोस् । यदि स्वीकार गर्न सक्नुभएन भने खाना नपचे, रोग बढ्छ ! पैसा नपचे, देखावट बढ्छ ! कुरा नपचे, कुरा काट्ने बढ्छ ! प्रशंसा नपचे, अहंकार बढ्छ ! निन्दा नपचे, दुश्मनी बढ्छ ! रहस्य नपचे, खतरा बढ्छ ! दुःख नपचे, निराशा बढ्छ ! सुख नपचे, पाप बढ्छ !
जीवन धारणा र वास्तविकता बीचको अन्तहीन यात्रा हो । एक निराशावादी र आशावादी एउटै दुनियाँमा बस्छन् । निराशावादीले समस्या र कठिनाइहरू देख्दछन् र एक आशावादीले अवसर देख्दछन् । अपूर्ण संसार एउटा गुरु पनि उही दुनियाँमा बस्नुहुन्छ, उहाँले पूर्णता देख्नुहुन्छ । राम्रो र नराम्रो, खुसी र पीडा, सबै यहाँ छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यो तपाईंमा निर्भर गर्छ ।
हामी केही पनि होइनौं, हामी त केवल कोषहरू, अणुहरूको थुप्रो मात्र हौं । संसार केवल हाम्रो विचार र हाम्रो विचारलाई जीवन दिने कस्मिक इनर्जीसँग अवस्थित छ । पुरानो जानुपर्छ नयाँ आउनका लागि, मृत्यु र जन्म एउटा चक्र हो, जो अनन्तसम्म चलिरहने छ ।
भौतिकवाद केबल भ्रम हो । समाजमा झाँगिदै गएको स्वार्थ, भोगविलास, लालसा, तृष्णा, लोभ जस्ता पक्षले जीवनको बहावलाई नै चुनौती दिइरहेका बेला जीवात्मा, आत्मा, अन्तरात्मा, जितात्मा हुँदै परमात्मामा पुग्ने बाटो नै सही बाटो हो ।
एउटा कुरामा तपाईं निर्धक्क हुनुहोस् कि विगत कहिल्यै फर्केर आउँदैन र भविष्य केवल वर्तमानका रूपमा आउँदछ । वर्तमानमा हामीसँग उपलब्ध भएका साधन र स्रोतहरूको सही उपयोग गरेर हामी एक उज्ज्वल भविष्यको सिर्जना गर्न सक्छौं ।
वर्तमानले विगतको गर्भबाट जन्म लिएको हो भने आउने भविष्य वर्तमानको गर्भमा छ । सधैं भविष्यबारे चिन्तित भएर होइन, बरु वर्तमानमा हामीसँग भएका सम्भावना जगाएर जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामी सबै भविष्यका लागि चिन्तित छौं र भविष्य बनाउन सक्षम पनि छौं तर विगत र भविष्यबारे चिन्ता गरेर हामी केही प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यस्तो चिन्तनले हामीमा भएको हाम्रो आन्तरिक शक्ति जसलाई वर्तमानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको क्षय मात्र हुन्छ ।
हामी हाम्रो चरित्र नबदली समाजको चरित्र बदल्न सक्दैनौं । समाजको चरित्र लाखौं व्यक्तिहरूद्वारा दिन–प्रतिदिन गरेका असंख्य स–साना कार्यहरूको परिणामले देखाउँछ । थोरै परिवर्तनहरू जुन समाजमा नदेखिन सक्छन् तर सम्पूर्ण समाजका सदस्यहरू आफूलाई परिवर्तन गर्नेतर्फ जाने हो भने सामाजिक रूपान्तरणात्मक महत्त्व बढी हुन्छ ।
नेता जोशीद्वारा स्वर्गीय गुरुङ्ग प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त
करेन्ट लागेर एक युवक घाईते
संघीयता साधक की बाधक ?
थप एक संक्रमितको मुत्यु